ဝါသနာရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကား၊ လိပ်စာ နှင့် ရွှံ့ ရုပ်တချို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ၀ါသနာရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကား၊ လိပ်စာ နှင့် ရွှံ့ ရုပ်တချို့
Posted by ရွှေ ကြည် on Aug 20, 2012 in Arts & Humanities | 54 comments
ဟုတ်ကဲ့ မိရွှေကြည်တင်ခဲ့တဲ့ ၀ါသနာအရဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာပါတဲ့ ပို့စ်မှ ရွှံ့ ရုပ်ဖန်တီးသူနဲ့ ရွှေကြည်မိတ်ဆွေအစ်မတို့
” ရွှေကြည်နှင့်တကွအားပေးအကြံပေးသူအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြင်းခြံကိုရောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၀မ်းသာစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ လေးမင်းရဲ့ အရုပ်လေးတွေလုပ်ထားတာ ၅ နှစ် ၆ နှစ် ရှိပါပြီ။
နောက်ထပ်ပုံပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားပေးကြပါဦး ”
လိပ်စာ – ဦးစောလှမင်း(စက်မှုတက္ကသိုလ်-ရေနံဘွဲ့ရပါတဲ့)
အမှတ် 10/259 အောင်မင်္ဂလာလမ်း
preview ကြည့်တာ ပတ်ဘလစ် ဖြစ်သွားတယ်။
မရေးပဲကျန်ခဲ့တဲ့ ထုံးစံစကားလေး မရေးလိုက်ရလို့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ! မေ့သွားမှာစိုးလို့ အရင်ပြောလိုက်တာ ! နောက်လည်း နောက်တာ ! တကယ်လည်းပြောတာ ! တကယ်ပြောတာက လိပ်စာချက်ခြင်းသိရလို့ပါ ။ ပုံတွေအားလုံး က လက်ရာမြောက် လိုက်တာ ။
ကျေးဇူးပါပဲ ညီမလေးရွှေကြည်ရေ။ မြင်းခြံရောက်ခဲ့ရင် ၀င်လေ့လာပါအုန်းမယ်။
ကိုရဲရင့်လှိုင်ရေ ရောက်ရင်ဝင်ကြည့်လိုက်နော်။ ကျေးဇူးပါ။
လင်းလင်းရေ ကျေးဇူးပါနော်။ ၀င်လေ့လာနိုင်ပါတယ်တဲ့။
Hotel တွေမှာ သုံးနိုင်တယ်နော်…
တော်လိုက်တာဗျာ။ တီဗွီထဲကကြည့်ပြီးလုပ်တာတဲ့။ အနုပညာသမား မဟုတ်တော့ ဘယ်လောက်လက်ရာမြောက်လဲ တော့မကြည့်တတ်ပါဘူးဗျာ။ လူပြိန်းမျက်စိနဲ့ ကြည့်ရတာတော့ သာမန်ပန်းချီ ပန်းပု ကျောင်းဆင်းပြီးသား သူတွေထက်တော့ အများကြီးသာ မယ်ထင်ထယ်။ ပါရမီပါ တယ်ပြောရမှာပေါ့နော။ နိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဝင်စားမဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ထင်တယ်။
အပေါ်ဆုံးက မာသာထရီဆာ ပုံက တော်တော်တူတာပဲ။
အပြင်မှာ အပင်လေးနဲ့ ထုပ်ထားတဲ့ လူခေါင်းပုံ ရွှံ့ရုပ်က မိုးဒဏ်လေဒဏ်ခံနိုင်ရဲ့လား မသိဘူးနော်။ အပြင်ထုတ်ထားလေးတွေ့လို့ပါ။
မအိရေ မှန်ပါ့နော် အပင်လေးတွေနဲ့တွဲလိုက်တော့ hotel တွေခန်းမတွေသုံးရင်ကောင်းမလားပဲနော်။
မပုခ်ျရေ မိုးကမြင်းခြံမှာသိပ်မရွာဘူးတဲ့ရှင့်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအရုပ်အခုမရှိတော့ဘူးလို့ကြားသိရပါတယ်။
စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ တချို့အရုပ်တွေကို ဘုရားနဲ့စာကြည့်တိုက်တွေကိုလှူပါတယ်တဲ့။
အဲပုံနှစ်ပုံထပ်နေပါတယ်ရှင့်။ သေချာမကြည့်မိတဲ့အတွက် အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်။
ခုလိုလိပ်စာသိချင်တယ်ဆိုတာကို ရအောင်ကြိုးစားပေးတာ ကျေးဇူးပါရွှေကြည်ရေ လိပ်စာနဲ့ ပုံတွေကို သိမ်း ထားပါတယ်။ အခွင့်ကြုံရင် သွားလေ့လာမလို့ ပါ။ ဦးစောလှမင်းကို မန်းဂေဇက်ကနေတဆင့် သိသွားပြီး ဂျာနယ်တွေ ပေါ်မှာပါ မကြာခင်မြင်ရမလားမသိဘူးဆိုတဲ့ အတွေးလေး ၀င်မိပါတယ်။ဦးစောလှမင်းရဲ့ ပါရမီ နဲ့ လက်ရာတွေကို နှစ်သက်စွာ ကြည့်ရှုသွားပါတယ်။
သူတတ်ထားတဲ့ ပညာကို ပြန်ပြီးတော့ ဝေမျှတဲ့အနေနဲ့ ပိုစ့်လေးတွေတင်ပေးရင် ကောင်းမယ်နော့ ။ ကုန်ကြမ်းက လည်း ရွှံဆိုတော့ လိုက်လုပ်ရတာ အဆင် ပြေမလားလို့။ သူတတ်ထားသမျှလေးတွေကို ပြန်ပြီးတော့ သင်ပြရင်တော့ ကျွန်တော် အရင်ဆုံး ရွှံခူးပြီး သင်ယူမိမှာပါပဲ။
အပေါ်က စ…ရေ..ရင် ငါးပုံမြောက် ပုံက ကြောင်ဝတုတ်နဲ့ အတော် တူတာပဲ..ဗျာ.။
ရွှေပုံ့ ရေ ဘယ်ရမလဲ စနေသမီးစိတ်ကကြီးပါဘိသနဲ့ ကိုယ့်ရွာသူားတွေသိချင်တယ်ဆိုမှတော့ကြိုးစားရတော့တာပေါ့။
အာဂရေ ဖြစ်နိုင်အောင်တော့ကြိုးစားကြည့်ပေးမယ်လေ။ ဒါပေသိ လက်တွေ့သင်မှပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ ကျေးဇူးပါ။
အလင်းဆက်ရေ ကိုင်ပေါက်နေဦးမယ်နော။ ကြောင်ဒေါသထွက်ရင်မလွယ်ဘူးရယ်
သူ့ မျက်လုံးထဲမှာ…နဲနဲဝတာနဲ့ 
ဟုတ်ပ ကိုမိုးမင်းသားရေ ရွှေကြည်တိုင်ကိုတိုင်ဦးမှာ ဒါမှကိုင်ပေါက်အောင်
အရီးမှာ အနုပညာ မျက်စိ နဲ့ ဗဟုသုတ မရှိလို့ အသေးစိတ် မဝေဖန်တတ်ပေမဲ့
မြန်မာ့ ပန်း ၁၀မျိုး – ပန်းပဲ၊ ပန်းတိမ်၊ ပန်းပု၊ ပန်းချီ၊ ပန်းယွန်း၊ ပန်းပွတ်၊ ပန်းတော့၊ ပန်းတမော့၊ ပန်းရန်၊ ပန်းတဉ်း မှာ
အဲဒီ ရွှံ့ ရုပ် တွေကို
ပန်းတော့ ပညာ ခေါ်မလား (အင်္ဂတေ၊ သရွတ်ဖြင့် ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွ အမွှမ်းတင်တန်ဆာ ပြုလုပ်သောပညာ)
ပန်းပု ပညာ (သစ်သား၊ ဆင်စွယ်၊ ဖယောင်း စသောဝတ္တုပစ္စည်းများကို ရုပ်လုံးရုပ်ကြွ ထွင်းထုသည့်ပညာ) လို့ ခေါ်မလား မသိ။
သူ့လက်ရာက ကမ္ဘာအဆင့်မှီ လို့ ပြောလို့ ရမယ် ထင်ပါရဲ့။
ပုံတိုင်း က လက်ရာ အတော်မြောက်ပါတယ်။
၁၁ပုံမြောက် က နွယ်သစ်ပင်တွေ နဲ့ ဟာက အိုင်းစတိုင်း ပုံ လို့ မှန်းတယ်။
တကဲ့ ကို တူပါပေတယ်။ အိုင်ဒီယာလဲ ကောင်းတယ်။
အဲဒီ ဟာ ပျောက်သွားတာ နှမြောစရာဘဲ။
အတော် ဈေးကောင်း ရမှာ သေချာတယ်။
အထုံပါရမီရှိသူ တစ်ယောက်မှန်း ထင်ရှားပါတယ်။
အဆက်အသွယ် ကောင်းသူ တစ်ယောက်ယောက် နဲ့ ဆက်စပ်မိသွားရင် မြန်မာ့ပန်းတော့ ပညာပါ ကမ္ဘာ သိသွားမှာ။
အောင်မြင်ကျော်ကြားသွားပါစေလို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒီလို ပုံလေးတွေ ကို ပြခွင့်ပေးသူရော၊ တင်ပေးတယ် ရွှေကြည့် ကိုရော ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ :-)
တိုင်တော့မတိုင် လိုက်ပါနဲ့ ခညာ.။ တားတား က..လေ..
သတိ ရလို့ … အလွမ်းပြေလေး..
ဘု၇ား သိကြား မ..လို့ .. ကိုကြောင်ဝတုတ် မမြင်ပါစေနဲ့ ..။
ဟုတ်ပ အရီးရေ ဘာလို့ပြောရမယ်မှန်းမသိတာနဲ့ မရေးလိုက်ဘူး။
ရွှေကြည်လည်း တကယ်လက်ရာမြောက်တာတွေ့တာနဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်တာ။
ပထမပို့စ်တုန်းကခွင့်ပြုချက်မယူပဲတင်လိုက်တာ။ ဒီတခုကတော့ သူကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တာအရီးရဲ့။
အဲဒီအရုပ်တွေက ရွှံ့နဲ့လုပ်တာဆိုတော့ ငယ်ငယ်က ကစားခဲ့တဲ့ ရွှံ့ရုပ်တွေနေပူရင် ခြောက်ပြီးကွဲကုန်တာ သတိရတယ်။
အဲဒီလို မကွဲအောင် နည်းပညာလိုမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒူးမှာ ဆေးမင်ကြောင်လေးပါခြယ်ပေးထားတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ဈေးကွက်ထဲက ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားသမားတွေနဲ့ လုပ်စားသင့်တယ်
ကျုပ်ကိုလည်းလျှော့မတွက်ပါနဲ့ လောက်စာလုံး လုံးတဲ့နေရာမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေသူဘာ
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု တို့ 
အူးကြောင် တို့ နဲ့ဆက်သွယ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်
ရောင်းဖို့ လုပ်ထားတဲ့ သူ့ အနုပညာတွေ ဈေးကောင်းရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်
usa ဈေးကွက်နဲ့ ယပလက် ဈေးကွက်ပေါ့နော
ရွှံ့တွေနဲ့ အရုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ဗျ ..
ဒါပေမယ့်လို့လည်း ကလေး အရုပ်လေးလေးတွေလုပ်ပြီး ဆော့ခဲ့တာပေါ့နော် ..
အမှန်ပြောရရင် ရွှံ့ကို အဲ့လောက်ပဲ သုံးလို့ရတာလို့ ထင်ခဲ့တာပါ ..
အခု ဒီအရုပ်တွေကို မြင်ရတော့မှ ရွှံ့တဲ့ တန်ဖိုးကလည်း မသေးပါလား ဆိုတာရယ် ..
ပညာတစ်ခုရဲ့ အံ့ဖွယ်ဖြစ်မှုရယ်ကို တွေ့လိုက်ရတယ်လို့
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောပါစေဗျာ …
နာမည်က မြန်မာလို ပြောင်းသွားပါလားဗျ ..
အဟဲ … ဒါဘာဘဲ ..
လေးခင်ခ ၀င်ကြည့်သွားတယ်နော်။ ကျေးကျေး။
ကိုအောင်ပုကြီး လောက်စာလုံးအလုံးတရာလောက်ရောင်းပါ။ (ရန်ကုန်တွင်ကျီးမောင်းရန်)
ဟုတ်ပမောင်ငယ်အံ အစ်မရွှေကြည်လည်းရွှံ့ရုပ်ပညာကို အခုအသက်အရွယ်ရောက်မှ ၀တ္ထုတစ်အုပ်မှာ
ဖတ်ဘူးပြီးသိတာ အခုတော့မြင်ဘူးသွားပြီ။ နာမည်ကလေ မြန်မာလိုပြောင်းရတာက ဒီလိုကွဲ့
မရွှေအိ နဲ့ ဆင်နေလို့မြန်မာလိုပြောင်းလိုက်တာပါ။ ဘာသဘောမှမဟုတ်ရပါဘူး။
အရမ်းကို လေးစား သဘောကျသွားပါတယ်
မနိုလည်း လက်မှူ့ ပညာလေးတွေကို အရမ်းဝါသနာပါတယ်
၀ါသနာနဲ့ စာဝတ်နေရေးက ဒွန်တွဲမနေလေတော့
ကျနော်တို့ဆီမှာ ဒီလို အတတ်ပညာရှင်လေးတွေလူမသိ သူမသိနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတာအတော်နှမျောစရာကောင်းပါတယ်။
မမနိုဗွီရေ ၀ါသနာနဲ့စားဝတ်နေရေးကဒွန်တွဲမနေလေတော့ တဲ့လားကောင်းလိုက်တဲ့စကားလေးရှင်။
လေးပေါက်ရေ ဟုတ်ပနော်။ ကြည့်ရှုဝေဖန်ပေးတဲ့အတွက် ဂိုမောင်းရော
သဂျီးဂ အဲ့ဒါမျိုးတွေ ဝယ်မှာလား ..
ဝယ်မယ်ဆို ကျုပ်တိုင်တိုင် ထုလုပ်ပေးမယ် ..
သူကြီးရေ ရွှေကြည်ရတဲ့ပုံထဲတော့မပါဘူးရယ် သူ့တူမကိုပြောလိုက်မယ်လေ
ကိုယ်တိုင်တော့ပြောရဲဘူးဗျ။ ခုလိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါသူကြီးရှင့်။
ရောင်းတန်းဝင် လက်ရာတွေပေမဲ့ ရောင်းမစားဘူးဆိုတော့ လက်ဆောင်တောင်းရင်
နောက်တာနော် အတည် နော် ဟိ။ မြင်းခြံမှာ စပ်မှတော်တဲ့ အမျိုးတွေရှိတော့ အလည်သွားဖြစ်ရင် ၀င်တောင်းချင် အဲလေ ၀င်ကြည့်ချင်တာဗျာ။
ရွှေအိရေ ၀င်သာတောင်းဗျား။ ဂေဇက်ကရွှေကြည်လွှတ်လိုက်တယ်သာပြော။
တခါတည်းမောင်းချရောဗျား အဟိ နောက်တာပါနော် ၀င်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
နိုင်ငံခြားသားတွေက ပိုကြိုက်မယ် ထင်မိတယ်
ရုပ်ထု တစ်ခု ကို ဘယ်လောက် နှစ်ကြာအောင်ခံလဲမသိဘူးနော်
ရေးထားတဲ့ အထဲမှာ မတွေ့မိလို့ ..
အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပေမဲ့တချို့ကိုဒီအတိုင်းရွှံ့ရောင်လေးအတိုင်းနဲ့ တချို့ကိုတော့ဆေးခြယ်ပြီးပြပွဲများပြနိုင်ရင် တော်တော်ကောင်းမှာ..
အဲဘယ်လောက်ခံလဲရွှေကြည်လဲမသိဘူးရယ်။ မပြောပြနိုင်တဲ့အတွက် ဆောရီးပါနော်။
မရွှေကြည်ရေ … အချိန်ရလျှင် … ကျွန်မgmail ကို ဆက်သွယ်ပေးပါလား … ။
ဒီရွံ့ ရုပ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့..စိတ်ဝင်တစားမေးချင်တဲ့ အကြောင်းလေး ရှိလို့ပါ ။
ဒီလိုလက်မှုပညာတွေ မတိမ်ကောစေချင်တဲ့ စိတ်လည်း ဖြစ်မိလို့ပါ ။
etone.mandalaygazette@gmail.com ပါ ။
ကျုပ်လည်း အက်လိုက်ဗျာ ..
ကျုပ်လည်း စိတ်ဝင်စားလို့ ..
နောက်ထာဘာ …. နော့ ..
မောင်ငယ်အံစာ တကယ်အက်လိုက်မယ်လေ မေးအကောင့်ပေး။
သွားရောက် လေ့လာဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါဂျောင်း ..
တတ်သိပညာရှင်များက ရွံ့ရုပ်တွေကြာရှည်ခံမဲ့ တက်ကနစ်မျိုးနဲ့ ထိမ်းသိမ်းပေးထားရင်ကောင်းမှာ…
Wow ရေ မှန်ပါတယ်နော်တက်ကနစ်လိုတယ်။
ကမ္ဘာဦးခေတ်တုန်းက ကြောင်နဲ့ဂေါ်ဇီလာ ဖိုက်နေတဲ့အရုပ် မရှိဘူးလားဗျ။ အဲဒီအကောင်ဂျီးတွေကို ကြောင်တွေဆော်ထည့်လို့ မျိုးတုန်းသွားတာလို့ သတ္တဒေဗပညာရှင်များ ပြောနေတယ်။။
မရွှေကြည်.. မြန်မာလို စာလုံးပေါင်းလေး ဖြစ်သွားပြီနော်…
ပြည်လုံးကျွတ် ပန်းချီ၊ ပန်းပု အနုပညာ ပြပွဲကြီး
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာ ပန်းချီ၊ ပန်းပု အနုပညာရှင် ၇၀၀ နီးပါးရဲ့ လက်ရာတွေကို တစုတစည်းနဲ့ ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်မယ့် ပြည်လုံးကျွတ် ပန်းချီ၊ ပန်းပု အနုပညာ ပြပွဲကြီးကို လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ တပ်မတော် ခန်းမ မှာ ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြပွဲရက် အတိအကျ မသတ်မှတ်ရသေးပေမယ့် ငါးရက်ကြာ ကျင်းပသွားဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ဒီပြပွဲမှာ အနုပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ ကိုယ်ဖန်တီးချင်တဲ့ လက်ရာတွေကို အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက် မရှိဘဲ ဖန်တီးခွင့်ရှိပြီး ဝယ်သူရှိရင် ရောင်းချ
နိုင်ပါတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရိုးရာ ပန်းပညာရှင်များအစည်းအရုံး အတွင်းရေးမှူး ဦးနီပိုဦး က ပြောပါတယ်။
ပါဝင်ပြသလိုသူများအနေနဲ့ သြဂုတ်က ၂၅ ရက်နေ့မှ စက်တင်္ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့အတွင်း မိမိရဲ့ ပန်းချီကား၊ ပန်းပု အနုပညာပစ္စည်းမှာ ရေးဆွဲထုလုပ်သူ အမည်၊ အနုပညာ ပစ္စည်းအမည်၊ အသုံးပြုသည့် အမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား၊ လိပ်စာ နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ရေးသားဖော်ပြပြီး အမှတ်(၁၃၁)၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ အနုပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ချင်းချောင်း)ကို ပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရတယ်။http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/9927-2012-08-22-11-48-04.html
ဦးကြောင်ကြီး သတင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သတင်းပြန်ပေးလိုက်ဦးမယ်။
“မမနိုဗွီရေ ၀ါသနာနဲ့စားဝတ်နေရေးကဒွန်တွဲမနေလေတော့ တဲ့လားကောင်းလိုက်တဲ့စကားလေးရှင်။
ရွှေကြည်ရေ.. ဒီမှာ ကြည့်လိုက်နော်
မနိုရေ မနိုစာကိုအခုမှပြန်ဖြစ်တော့မယ် ဖယောင်းရုပ်လေးတွေလှပါ့
၀ါသနာရှင်ပို့ စ်မှာ ကွန်မန့် ရေးပြီးထားခဲ့တာ…
အခုပို့ စ် တက်လာတာ မသိလိုက်ဘူးဗျ..
ကိုစောက ၀ါသနာရှင် အဆင့်မဟုတ်တော့ပါဘူး..
ကျနော်လည်းဆက်သွယ်ပြီး လိုအပ်တာရှိခဲ့ရင် ကူညီပေးချင်ပါတယ်…။
မျက်နှာပိုင်း ပုံတူ ထုတာတွေ ပိုကြိုက်တယ်..
ကျနော် အလည်လာရင် ဆုံချင်ပါတယ်လို့ .. ကျနော့်ဘက်က အခြေအနေပေးရင် သူ….မဖိတ်လဲ
မြင်းခြံကို အတင်းကို လာလည်မှာလို့ …။
ကိုကျော်စွာခေါင်ရေ ကျေးဇူးပါဗျ သွားလည်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဗျာ ကိုကျော်စွာခေါင်လည်း ပညာရှင်ဖြစ်ရမယ်ဗျ
၀ါသာနာတူချင်းဆို ပိုလို့တောင်ကြိုဆိုဦးမယ်ထင်တယ် ဆွေးနွေးလို့ရတာကိုးဗျ ၀င်သာလည်လိုက်ပါဗျာ ဒီပို့စ်တွေကတင်ထားတာကြာပါပြီ သူကြီးပြန်မွှေထားလို့ ပြန်မြင်ရတာ
ကိုကျော်စွာခေါင် မျက်စိလည်သွားတာပါ ကျေးကျေးပါနော်